Nezvedu - Wisdom Metal chinoumbwa Co., Ltd.
Alucosun, iyo nyowani nyowani yeAluminium Composite Panel musika! Chikwata chedu chine makore anopfuura makumi maviri 'chiitiko muAluminium Composite Panel Indasitiri, kubva Mukugadzira kuenda kuGadzira Chigadzirwa. Isu tave takagadzirira kuve inotungamira yepasirese inogadzira neazvino tekinoroji uye yepamusoro mutengi aftercare uye rutsigiro.
Kubva pakutanga chaiko, Alucosun anga achichengeta maziso ayo akavhurika kune rwose rwendo, kubva pakutorwa kwezvinhu zvakasvibirira kusvika kune chekupedzisira chigadzirwa. Zvese zvinhu kubva dhizaini yekugadzira zvinozadzikiswa nehunhu hwekutonga sisitimu - yakanyatsogadzirwa nevanoongorora mahunyanzvi uye epamberi malabhoritari zvishandiso, ichisimbisa zvese zvigadzirwa zvinoenderana nematanho epasi rose: European Germany DIN, Commonwealth UK BS, American ASTM, Middle East uye zvichingodaro.
Alucosun timu yakazvipira kutsigira vatengi vedu nekupa iyo panguva yekuendesa yezvinhu zvakavimbika zvigadzirwa uye masevhisi akasarudzika kukosha. Zvese izvi zvinhu zvinogona kubatsira mukuwana mukana wemakwikwi mumusika wako. Isu tinovavarira kutsigira chiono chedu uye basa nekugara tichitsvaga kuvandudzwa nekusimudzira kuburikidza neyakaenderera mberi dzidzo uye kudzidza. Isu tinovavarira kuvandudza matekinoroji matsva uye akanakisa maitiro ebhizinesi. Zvekusimudzira zvizere, vashandi vedu kudada kwedu, uye isu tinovavarira kupa inonakidza, yekurera uye yekukura yakatarisana nharaunda iyo inokurudzira vashandi vedu kuti vabudirire zvakanyanya uye kuti vakure pachedu nehunyanzvi.
isu tinogovana nekutenda kwakajairika uko kwete kwete chete kugona, asi zvakare mafungiro anogona kuona remangwana redu.
Uya kuzobatana nesu uye utiite shamwari yakavimbika yeumwe neumwe!
Alucosun yakagadzirirwa nemaviri kupfeka uye mashanu ekugadzira lamination mitsara (yakanyanyisa 2000mm-upamhi tambo inosanganisirwa). Iine makore anopfuura makumi maviri 'ruzivo Alucosun yakaparadzira mapapiro ayo pasirese nekupa vatengi vayo zvigadzirwa zvakagadzikana uye zvemhando yepamusoro.
1) Zvishandiso ruzivo:
Ichitenderera & Rewinding michina 3 seti
Makemikari Kuchenesa mitsara 2 seti
Speed ​​Kumhara mitsara 2 seti
Maumbirwo Lines 5 seti
2) Kugadzira kugona / Gore:
Aluminium Yakaumbwa Mapaneru 7.6 mamirioni / sqm
Aluminium Lattic Panels 1 miriyoni / sqm
Aluminium Yakavharwa Coils 18500 matani